consciousness - Synonyms of consciousness | Antonyms of consciousness | Definition of consciousness | Example of consciousness | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for consciousness
Top 30 analogous words or synonyms for consciousness
ဖြစ်တည်မှုပဓာနဝါဒ ဖြစ်တည်မှုဝါဒရဲ့ အဓိက အဆိုပြုချက်ကတော့ `ဖြစ်တည်မှုဟာ အနှစ်သာရထက် အရင်ကျတယ်´ (existence precedes essence) ဆိုတာပါ။ လူသားအဖြစ် ဖြစ်တည်နေမှုဟာ လူသားကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်၊ ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ အပေါ်ယံသကာလောင်းမှုတွေထက် ပိုပြီး အခြေခံကျတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဒီသဘောတရားဟာ ဆင်ခြင်တုံတရားဝါဒ (Rationalism) ၊ ဆင်ခြင်မှု (rational consciousness) သက်သက်ကို အားပြုတဲ့ ဒေးကား (Descartes ပြင်သစ်တွေးခေါ်ပညာရှင် ၁၅၉၆-၁၆၅၀) စတဲ့ အနောက်တိုင်းက အစဉ်အလာ ဆင်ခြင်မှု ဒဿနသမားတွေကနေ လမ်းခွဲထွက်လိုက်ပါတယ်။
ဗွီ-၁ ဗုံးပျံ A myth arose that early guidance and stabilisation problems were resolved byadaring test flight by Hanna Reitsch inaV-1 modified for manned operation. The myth entered popular consciousness from Reitsch's fictional exploits in the film "Operation Crossbow".
ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ကျင့်သုံးသောဗုဒ္ဓဘာသာ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ယောဂါစာရနဲ့ မဓျာမိက အဘိဓမ္မာနှစ်ဂိုဏ်းရှိသည်ဟု အပေါ်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ စန်ရွန်းဟာ မာဓျာမိကဂိုဏ်းဖြစ်သလို ဟိုဆိုဂိုဏ်းဟာ ယောဂါစာရအဘိဓမ္မာအပေါ်မှီပြီး တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဂိုဏ်း ဖြစ်ပါသည်။ ယောဂါစာရဂိုဏ်းကို ဝိဉာဏဝါဒလို့လည်း ခေါ်ကြပါသည်။ ယောဂါစာရဂိုဏ်းကို တည်ထောင်သူတွေကတော့ အရှင်အသုင်္ဂနဲ့ အရှင်ဝသုဗန္ဓု မထေရ်ညီနောင်နှစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။ အရှင်ဝသုန္ဓုဟာ အပေါ်မှာပြောခဲ့သော အဘိဓမ္မာကောသကျမ်းကို ရေးခဲ့တဲ့ မထေရ်ပဲဖြစ်ပါသည်။ အစမှာ အရှင်ဝသုဗန္ဓုဟာ သဗ္ဗတ္ထိဝါဒဂိုဏ်းဝင်ဖြစ်ပေမယ့် အစ်ကိုဖြစ်သူ အရှင်အသုင်္ဂကြောင့် မဟာယာနဂိုဏ်းဝင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယောဂါစာရဂိုဏ်းဟာ လောကရဲ့ အရှိ၊ မရှိတရားတွေကို စူးစမ်းလေ့လာတဲ့ တက္ကိဗေဒ (metaphysics) မဟုတ်ပဲ ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ကြုံရတဲ့ အတွေ့အကြုံ (experience) တွေကို ရှင်းပြတဲ့ ဒေသနာဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြစ် လောကရဲ့ သဘာဝအစစ်အမှန် ရှင်းပြဖို့ မဟုတ်ပဲ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား ဘာဝနာ ကျင့်ကြံသူတွေအတွက် လမ်းညွှန်သဘော ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင် ယောဂါစာရ (ယောဂ/ တရားဘာဝနာ ကျင့်ကြံသူ၊ ယောဂ/ တရားဘာဝနာအကျင့် တစ်နည်း အားဖြင့် ပဋိပတ်) လို့ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယောဂါစာရအယူအဆအရ ခန္ဓာငါးပါးထဲက သိမှု ဝိညာဏခန္ဓာကို ရှစ်မျိုးခွဲလို့ ရပါသည်။ ပထမငါးခုကတော့ အာရုံခံအင်္ဂါတို့နဲ့ စပ်ဆိုင်တဲ့ သိမှုဝိဉာဏ်တို့ ဖြစ်ပြီး ခြောက်ခုမြောက်ကတော့ နာမ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ မနောဝိဉာဏ်ဖြစ်ပါသည်။ ခုနှစ်ခုမြောက်ကတော့ ငါစွဲ၊ အတ္တစွဲကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ သံကိလိဋ္ဌဝိဉာဏ်ဖြစ်သည်။ ဒါတွေဟာ ကိလေသာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီရှစ်မျိုးအနက် ခုနှစ်မျိုးဟာ အခြေခံအကျဆုံးဝိဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ အာလယဝိဉာဏ်အပေါ်မှာ မှီတွယ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်သည်။ အာလယဝိဉာဏ်ဟာ ကမ္မဗီဇ ဒါမှမဟုတ် မိမိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကံ မျိုးစေ့တွေ ကိန်းအောင်းရာ ဂိုထောင်သဖွယ် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါသည်။ ဒါကြောင့် အာလယဝိဉာဏ်ကို ဂိုထောင်ဝိဉာဏ် သို့မဟုတ် သိုလှောင်ရုံဝိဉာဏ် (storehouse consciousness) လို့ ခေါ်ပါသည်။ (အာလယဝိဉာဏ်ဟာ ထေရဝါဒရဲ့ ဘဝင်စိတ်နဲ့ ဆင်တူသည်) အာလယဝိဉာဏ်ဟာ ကမ္မမျိုးစေ့တို့ သိုလှောင်ရုံသဖွယ် တင်စားထားပေမယ့် တကယ်တမ်းကတော့ ကမ္မမျိုးစေ့တို့ ဖြစ်ပေါ်လိုက် ပျောက်ပျက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ "collective" တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး အတ္တဝိဉာဉ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအပြင် ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ ဗြဟ္မလို့ခေါ်တဲ့ Universal (Collective) Sprit/ Consciousness သဘောမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး (ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ သတ္တဝါတစ်ဦးစီမှာ အာလယဝိဉာဏ်တစ်ခုစီ ရှိသည်။ ထို့အပြင် အာလယဝိဉာဏ်ဟာ အဆုံးအစွန် ပရမတ္တအရှိတရားလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အနိစ္စသဘောအတိုင်း အမြဲပြောင်းလဲနေသည်။) ဗောဓိဉာဏ်ကို ရရှိပြီး ဘုရား၊ ရဟန္တာအဖြစ်ကို ရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့ ဒီ ဝိဉာဏ်ရှစ်ပါးဟာ ချုပ်ငြိမ်းသွားပြီး ဗောဓိဉာဏ်အလျောက် စင်ကြယ်တဲ့ သိမှုတို့ အစားထိုးပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ ဆိုသည်။ ဟိုဆိုဂိုဏ်းကို တည်ထောင်ခဲ့သူကတော့ ဆရာတော် ကူဂျိ ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုဆိုဂိုဏ်းဟာ တစ်ချိန်က အလွန် အားကောင်းခဲ့ပြီး ဘုရင့် ဩဇာကိုပါ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း ရှိခဲ့ပေမယ့် အခုခေတ်မှာတော့ ဟိုဆိုဂိုဏ်းဟာ သေးငယ်တဲ့ ဂိုဏ်းငယ်အဖြစ်သာ ကျန်ခဲ့သည်။